Xeerarka Xannaanada Cannabis - Maxay Dawladu Ugu Dacweeyneysaa Liisanka Xashiishadda -
Sida loo Dalbo Shatiga Cananbis
Ma dooneysaa wicitaan deg deg ah oo ku saabsan dalabkaaga
Dib ugu eeg Arjigaaga Qareenka Xashiishka
Waxaan dib u eegi doonnaa oo aan dhaleeceyneynaa dalabkaaga ruqsadda cannabis annagoo indhaha ku hayna goolasha iyo halista suurtagalka ah ee dacwadda ay yeelan karto.
Waxaan dib u eegi doonnaa oo aan dhaleeceyneynaa dalabkaaga ruqsadda cannabis annagoo indhaha ku hayna goolasha iyo halista suurtagalka ah ee dacwadda ee ay lahaan karto. Na soo wac si aan u keydinno $ 500 dib-u-eegista dalabka ee lacag caddaan ah ama jeeg bixinta.
Waan aqbalayaa Shuruudaha iyo Xaaladaha
Previous Bixi $$ 5500
Waad ku mahadsantahay iibsigaaga.
Maxay kooxdu ugu iibinaysaa Liisanka Xashiishka
Xeerarka Kaararka Xashiishka dhacdaa kadib wareegyada codsi ee la tartamo. Gobollada ama Degmooyinku waxay la kulmaan halista dacwada marka loo eego tartannada codsiyada liisanka xashiishadda marka tirada codsiyada ganacsiga cannabis ay aad uga badan yihiin rukhsadaha la heli karo. Dheeraad ah, codsiyada liisanka xashiishadda ayaa had iyo jeer lagu qiimeeyaa dhinacyo saddexaad, sida shirkad xisaabeed oo weyn-afar, kuwaas oo khaladaad ku samayn kara qodobbada. Waxaad filan kartaa in koox badani ay dacwayn karaan liisanka xashiishka haddii ay aamminsan yihiin inay guuleysteen. Waa tan maqaal kooban oo ku saabsan howsha.
Qodobbada ugu muhiimsan ee dacwadaha ka dhanka ah Shatiga Xashiishka
Raac xeerarka gobolkaaga ama deegaankaaga
Soo ogow waxa khaldamay arjiga
u hogaansanaato nidaamka rafcaanka go'aanka maamulka
Ogow dacwoodu waa wax aan la saadaalin karin oo waad waayi kartaa
Hayso cabasho qoraal ah oo ku qancisa iyo dhaqdhaqaaqyo
Baro wax walba oo ku saabsan sida loogu guuleysto liisanka mustaqbalka
LA XIDHIIDH BADAN: Codsiga Shati-siinta ee Illinois
LA XIDHIIDH BADAN: Xashiishka iyo Daraasadaha Cilmi baarista
Ma Dooneysaa Qareen Xashiishad inuu Dib U Eegto Arjigaaga?
Hel Codsi Dib u eegis ah
KU SAABSAN MAGACAAGAAGA EE CODSIGII LIISKA CANABIS
Waxaan dhamaanteen qabnaa in, ka dib markii aan si aad ah u shaqeyneynay, aad u adag inaan u qalanay inaan ku guuleysanno liisanka xashiishadda cannabis - laakiin waddammada tartanku ka jiro - dadka intooda badani kuma guuleystaan. Waana taa marka ay dacwadaha bilaabmaan… waxaan ka wada hadli doonaa waxa ku saabsan qormadan maanta ah.
Diiwaangelinta Lacagta - CUSBISKA SHARCIYADA MAAMULKA
Waad ku mahadsan tahay ku soo biiristaada, Aniga waxaan ahay Tom - waxaadna ka heli kartaa adoo aadaya websaydhkayga - cannabis wershadaha qareenka.com - halkaas oo aan ku soo dhigo waxyaabo sidan oo kale ah si aad u ogaato waxkasta oo aad rabto inaad ka ogaato warshadaha cannabis sharciga ah.
XUQUUQAHA KANSISKA XUKUUMADAHA CINWAANKA MACLUUMAADKA MADAXWEYNAHA
Waa tan wax aad hore u ogaan laheyd - dowladaha gobolka oo dhan ma u ogol yihiin qof kasta oo raba shatiga xashiishadda inuu helo mid - Gobollada sida Illinois, ama Missouri, Maryland - waxay qaateen nidaam shati shati tartan oo ay codsiyadooda ku qiimeeyaan sidaas oo lagu yiraahdo khubaro inay yihiin “kuwa ugu fiican. ” Feejignow ilaa dhamaadka waxaan kuu sheegayaa hab lagu joojin karo dacwadaha oo dhan, taas oo ii cuntami weyso sidii garyaqaanka xashiishadda. Laakiin taasi micno uma laha Illinois, ama gobolkaaga.
CODSADAHA KALE OO KA BADAN NATIIJOOYINKA AANAN FASALKA LAGU SAMEEYO CUDURKA KHATARTA
Xitaa haddii kooxdaadu ay xoog badan tahay oo aad heshay ruqsad. Illinois kaliya ayaa loo qoondeeyay afartan milkiilaha farsamada gacanta iyo 40 ruqsadaha ugaarsiga. Iyo, Illinois kaliya ayaa abaal marin doonta 75 laysanka isticmaalka-dadka waaweyn ee waaweyn, laakiin waxay ka heshay dalabyo ka badan 700 kooxaha soo gudbiyay inka badan 4,000 oo codsi. Markaa ardyadu way dheeraadeen - iyo Dawladdii dhowaan abaalmariyey KPMG, oo ah mid ka mid ah afarta shirkadood ee waaweyn ee xisaabaadka leh, ayaa ah qandaraaska lagu dhaliyo wareegii ugu dambeeyay ee codsiyada baahsan. Qandaraasku wuxuu bixinayaa mashruuc wadatashi oo qarsoodi ah oo qarsoon laba milyan oo doollar ($ 2,000,000).
KHATARTA KHATARTA DUGSIYADA DHEXE EE CODSIYADA LACAG-QAADASHADA
Qoraal kale oo xiise leh oo ku jira qandaraaska Gobolka uu la galay KPMG waa in ay ku qiyaasey $ 500,000 kale “la-tashi sharci,” qiime aad u badan oo ah $ 200 / saacaddii. Marka la eego shuruudaha dadka, Gobolka wuxuu umuuqdaa inuu ku wareejin doono boqolaal saacadood oo shaqo dib u eegis ah "qareen" ama "mashruuc" qareen. Haddii aadan horey u aqoon - ka dibna ku burburi kuwa ay jecel yihiin oo is-diiwaangeliya si ay wax badan uga bartaan sharciyada xashiishadda - laakiin shaqada qareenka qandaraasku waxay run ahaantii ku lug leedahay inay qaloociyaan qareeno khibrad u leh qol, halkaas oo lagu siiyo lacag aad u yar oo ay ku qodaan shaqada monotonous. , taas oo dhalisay badeecad ay dad aad u yar jecel yihiin - xitaa dadka aan sameyneyn. Taasi waa kan u muuqda inuu dooranayo kooxdii ku guuleysata shatiga. Taasoo nuugaysa wakhti weyn marka aad tixgelinayso xisaabta arrinta.
Xisaabta fudud ayaa qeexeysa in codsadayaasha badankood ay waayi doonaan. 4,000 oo dalabyo ah oo keliya 75 shatiyada shatiga ah waxay u dhigantaa fursad 98.125% ah inuu ku guuldareysto - sida hadalka uu yiri, rajadu waxay weligeed ku waaraysaa orodka cagaaran ee warshadaha cannabis. Haddii u-helistu aysan muddo dheer ku filneyn, hannaanka dhibcaha ee uu dejiyay gobolku waxay u badan tahay in codsadayaasha qaarkood ay si fudud ugu lumi doonaan qaladka aadanaha awgood. Sababo wanaagsan awgood, kooxdaadu waxay rabi karaan inay dacweeyaan Gobolka ama degmo si ay u helaan ruqsadda ganacsiga xashiishadda ee ay aamminsan yihiin inay kasbadeen.
Marabtaa inaad Rafcaan Ka Qaado Go'aankaaga
Hubi Sharciga Gobolkaaga Sida Loo Rafcaan Ka Qaado Go'aanka Shatiga Xashiishka
Dhanka Illinois, the Xeerka Xashiishka iyo Sharciga Canshuuraha wuxuu u oggolaanayaa codsadayaasha inay dacweeyaan sida ku xusan Sharciga Dib-u-eegista Maamulka ee gobolka oo sheegaya "in go'aannada maamul ee ugu dambeeya ee waaxda ay hoos imaan doonaan dib-u-eegista garsoorka iyada oo la raacayo qodobbada Sharciga Dib-u-eegista Maamulka [.]" Sharcigu wuxuu siinayaa habraacyada dib-u-eegista garsoorka. Waxay ka dhacdaa gobolka ay ku yaallo qaybta uu codsanayo dib u eegista (codsaduhu) deggan yahay, ama Degmada Sangamon ee xafladda gobolka ka baxsan. Markaad ka hadlaysid daawadayaasha gobolka ka socda, ka eeg maamullada kooxdu ay khuseyso, xuquuqdeeda qaaska ah. Waxaad u baahan tahay inaad u hoggaansanaato shuruudahaas si aad u daba gasho xuquuqahaaga.
Habraacyada Nidaamka Dib u eegista Maamulka waa in la raacaa
Sharciga Dib-u-eegista Maamulka ee Illinois ayaa leh qodobo dhowr ah oo xusid mudan oo lagu sameeyo arrintaas. Waxay u baahan tahay in qaybta raadineysa dib u eegista ay xereyso cabasho oo ay soo saarto wicitaan gudahood shan iyo soddon (35) maalmaha go'aanka maamulka la xiriira. Dacwooduhu wuxuu asal ahaan u baahan karaa Wasaaradda Beeraha ama IDFPR inay siiso diiwaangelin buuxda ee hannaanka dib-u-eegista sida ku xusan Qeybta 3-108 (a). Si kastaba ha noqotee, "[n] o caddayn cusub ama dheeraad ah oo taageeraysa ama ka soo horjeedda wixii raadinta, amarrada, go'aannada ama go'aanka hay'adda maammulaha ayaa dhageysan doona maxkamadda." Isla qaybta ayaa bixineysa in '[uu] helo natiijooyinka iyo gunaanadka wakaaladda maamulka arrimaha ku saabsan su'aalaha dhabta ah la qaban doono ugu horeyntii run oo sax ah. "
Xusuusnow wakhtiyadan oo dhan waxaan idhi waxaad ubaahantahay codsi buuxa oo dhameystiran sida ugu macquulsan - taasi waa sababta oo ah nidaamka rafcaanka ee gobolkaaga wuxuu qaataa codsigaas asal ahaan rikoorkaaga rafcaanka mana ku dari kartid wax cusub oo ku soo kordha si aad u bedesho aragtidooda.
Intaas waxaa sii dheer, halkan way ku dhici kartaa - taas oo ah koorsada dacwadda muranka dhalista ah - codsiyada xashiishadda ayaa inta badan leh shuruudo la taaban karo, oo leh nidaam dhibic oo muuqata. Si kastaba ha noqotee, codsadayaasha waxaa lagu qiimeeyaa oo keliya iyada oo aan loo hoggaansamin sharciga, laakiin sidoo kale kartidooda iyo kartidooda ganacsi. Tusaale ahaan, haddii Gobolku go'aansado in hab-codsadeyaasha iyo xaddiga raasamaalku ay wanaagsan yihiin, laakiin maya weyn, taasi ma go aanka sharciga mise xaqiiqda? Codsiyadaani waxay umuuqdaan kuwa aad moodaa su’aalo isku dhafan oo sharciga iyo xaqiiqda ah - taas oo ah wax khalkhal galinaya kuwa aan garyaqaanka aheyn, oo codsadayaasha badankood aysan aheyn.
Intaa waxaa sii dheer, himilooyinka ujeeddooyinka la xaqiijiyey runtii waxay ku saleysan yihiin go'aamada aadanaha ee aadka u culus. Dhibaatada kale ee ka sii adag ayaa ah waqtiga loo sii daayo dhibcaha lagu dhisay qaanuunka, kaas oo lagu badali karo oo keliya amarka fulinta. Tani waxay horay uga dhacday gobolka Illinois, markii bishii Maarso 12, 2020, Guddoomiyaha JB Pritzker uu soo saaray amar fulin ah oo la xiriira coronavirus kaas oo ku kordhiyey waqtiga ugu dambeysa ee gudbinta dalabka laba toddobaad. Dib-u-dhacyo dheeri ah ayaa laga yaabaa inay soo socdaan Illinois. Waxay horay uga dhacday gobolo kale - iyadoo aaney jirin masiibo caalami ah oo lagula tacaasho.
Dib-u-fiirinta Sida Loogu Xidho Shatiga Xashiishka ee Wadamo Kala Duwan
Markaan dib u fiirino gobolada kale ee ah hage ahaan, waxaan fikir fiican ka haysannaa waxa ku soo socda markii dacwadda xashiishadda cannabis la soo boodboodo. Gobolka Florida wuxuu qaatay dhaqanka ah inuu si fudud ula qabsado garyaqaanada iyadoo lagu bedelayo deeq a ruqsada. Florida sidoo kale waxay dhex maraysaa dagaal sharci ah oo gooni ah maxaa yeelay gobolka wuxuu u baahan yahay shirkadaha cannabis in ay si toos ah u joogaan isku dhafan, kaas oo leh saameynta abuuritaanka caqabado waaweyn gelitaanka. Missouri waxay sidoo kale wajahaysaa xanuun daran kadib wareeggii ugu dambeeyay ee codsiyada. Waxaa jira dacwooyin aad u tiro badan - boqollaalkii - la sugayo kadib markii inbadan oo boqolaal iyo boqolaal codsadeyaal ah ay ku guuleysteen inay uqalmaan gobolka. 60 rukhsad beero. Dhibaatada badan ee ka jirta Missouri ayaa ah in kuwa guuleysta ay u muuqdeen kuwo inta badan siyaasad ahaan ku xiran shaqsiyaadka. Markii aan diyaarineyno kooxdeena codsade, waxaan markii ugu horreysay aragnay inta isbeddel ah ee dawladaha hoose ay sameyn karaan kaalmaynta ama ka soo horjeedda codsadaha. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay mar hore oo aan dhahay, oo hadaad isqoriso waad maqli doontaa mar labaad ayaan dhahayaa - xashiishadda cannabis oo dhan waa maxalli.
Nidaamka Shatiga Liisanka Cannabis iyo Nidaamyada Bakhtiyaa-nasiibka
Si xaqiiqo ah uma dhihi karno sida dacwada xashiishadda ay uga dhici doonto Illinois. Laakiin haddii Florida iyo Missouri ay yihiin wax calaamad ah, waxay ku saabsan tahay inay noqoto ganacsi weyn oo halkan lagu sii joogayo. Waad ku mahadsan tahay daawashada illaa dhammaadka - Haddaba aan ka fikirno qaab ay gobollada qaarkood uga fogaan karaan qaan-u-dhigga codsiyada qaldan ee codsadayaasha ee ah natiijada ugu sarreysa. Ka fogaanshaha dacwadan waxay noqon kartaa shay uu gobolku doonayo sharcigiisa inuu fuliyo.
Gobollada sida Arizona, tusaale ahaan, waxay soo jeediyeen sharciyada xashiishadda ee ku baaqaya shuruudaha qaarkood inuu buuxiyo codsade u shaqeynaya sida bilowga u-qalmitaanka inuu ku cayaaro bakhtiyaanasiibka liisanka. Illinois 'wicitaanada bakhtiyaa-nasiibka haddii ay jirto isku dheelitira codsadayaasha ugu goolasha badan. Bakhtiyaanasiibka bakhtiyaa nasiibku waa ka sii adag tahay in lagu doodo in lagu khaldamay, mooyee. Laakiin runtii waxba lagama xallin karo warshadaha xashiishadda, ama warshado kasta - sax?